Warbaahinta Madaxa banaan ee Puntland oo loo diiday ine soo tebiyaan kal fadhiga Barlamaanka Puntland xalad cakiran oo ka taagan Hoolka. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Warbaahinta Madaxa banaan ee Puntland oo loo diiday ine soo tebiyaan kal...
Warbaahinta Madaxa banaan ee Puntland oo loo diiday ine soo tebiyaan kal fadhiga Barlamaanka Puntland xalad cakiran oo ka taagan Hoolka.
Garowe (Caasimadatimes)-madaxtooyada Puntland ayaa doonayso in kalfadhiga baarlamaanka furitaankiisa laga dhigo qarsoodi oo loo diido in aysan imaanin warbaahinta madax banaan, taas oo ah xaq dastuuri ah oo ay leeyihiin bulshadu in ay helaan xogaha rasmiga ah iyo khudbadaha kulanka laga jeediyo.
Warbaahinta Madaxa Banaan ee saaka ka qayb galaysa Furitaanka Kalfadhiga 45aad ee Barlamaanka Puntland ayaa lagu war galiyey in la ogolayn in wax shaqo ah ka qabtaan xarunta barlmaanka isla markaana ay goob joog uun ka noqdaan marka fadhigu dhamaadana warfaafinta Baarlamaanku siin doonto muqaalada iyo cododka oo diyaarsan.
Arintaan ayaa noqonaysa markii kowaad Xarunta barlamaanka Puntland loo diido in ay wax ka duubtaan Warbaahinta madaxa banaan waxayna tani u muuqataa Faafreeb horu-dhac ah oo uu samaynayo barlamaanka Puntland taasi oo ka hor imanaysa dastuurka Puntland oo qeexaya in uu reeban yahay Faafreeb horu dhac ah .
Madaxtooyada Puntland ayaa xalay dadaal badangalisay sidii loo diyaarin lahaa iskudaygan oo meelmar looga dhigi lahaa, waxaase muuqata in ay tahay caburin Saxaafadeed oo bilow ah, waana markii 1aad ee dhacdadan ay dhacayso tan iyo markii la asaasay Puntland.
Previous articleCeeb iyo fashil Madaxtooyada Puntland oo Kulamo Qado & Shaqo Maalmeedkii M/weyne Deni ku sheegtay waxqabad laga sameeyey Boosaaso.
Next articleDowladda oo Ciidamo dheeraad ah geysay Dhuusamareeb Cabsi weyn oo ka jirta in..
Weerar culus oo aan horey lo arag oo lagu qaaday Qoys...
(SAWIRRO)-Shirka iskaashiga Soomaaliya oo furmay iyada oo ay maqan yihiin Labo...